Androidsis အင်တာဗျူးများ - @Anderwebs | Androidsis
ငါတို့သေးသေးလေးလုပ်တယ် အင်တာဗျူး android programmer ကိုရန် Ander ဝက်ဘ် (သူ၏ twitter) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူသည် Android operating system ၏ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအချို့နှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။
>ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို: အလွန်ကောင်းသော Ander ။ Android Market မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့သူရှိရင်ဘာ app များကိုသင်ထည့်သွင်းထားသလဲ။ သင်သည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုသာထိန်းသိမ်းထားသလော။
အဖြေ: ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် ADW.Launcher, ADWLauncher EX နှင့် ADWNotifier များကိုသင့်လျော်သော application များသာရှိသည်။ ငါသူတို့အား applications များ update နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအခြားကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများမရှိပါ။
>P: ADW သည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သင်ဤကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်ခဲ့သလား၊
R: ဒါဟာအားလုံးပျံသန်းအပေါ်ခဲ့ပါတယ်, ငါလုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လေ့လာရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်၊ အသုံးပြုသူတောင်းဆိုချက်တစ်ခုစီကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၎င်းကိုအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရသည်။ ငါ "ဒါလုပ်နိုင်သလားကြည့်ရအောင်" ထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ application တွေမှာ configuration options အများကြီးရှိတယ်။
> P: Android fragmentation နဲ့ပြproblemsနာများစွာကြုံတွေ့ဖူးလား။ သို့မဟုတ်၎င်းသည်သင့်အတွက်မြို့ပြဒဏ္likeာရီတစ်ခုကဲ့သို့ထင်ရသလား။
android version အားလုံးတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောတူညီသော application တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ဖြေရှင်းနည်းများသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
၁- သင်၏လျှောက်လွှာကိုခေတ်ပေါ်မူကွဲများ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒြပ်စင်များအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသည့်အန်ဒွိုက်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို ဦး တည်ထားပါ။ (ရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အမြင်အရအလားအလာနည်းသော်လည်းသင့်လျော်သည်) ။
၂။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်ရန်၊ “ penultimate” android ဗားရှင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများတွင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ထုတ်ပါ။ အဆုံးစွန်သည်အထိရောက်ဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည် (android မတည်ရှိမီကတည်းကသမားရိုးကျအရဆုံး) ။
နည်းပညာကဏ္ sectors အားလုံးမှာအမြဲတမ်းကွဲလွဲမှုရှိတယ်၊ အဲဒါကို Android အတွက်ပြspecificနာတစ်ခုလို့ငါမမြင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ iPhone3, iPhone4, iPad နှင့် iPad2 နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သောဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်ရှေ့ကင်မရာမပါဝင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။
> P: ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်များရှိသည့်၊ အသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းအလုပ်နှင့်ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်ရှိ application များ။
R: ငါက open source ကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးချင်တယ်။ ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းပြချက်ကငါဖတ်ခဲ့တဲ့တတိယပါတီ open source အားလုံးအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာဗဟုသုတတစ်ဝက်လောက်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
> P: အခမဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအပြည့်အဝပေးချေသည့် application ကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း။ ငွေပေးချေမှုကိုပိုမိုမြှုပ်နှံရန်သဘောထားရှိပါသလား သင်အခမဲ့အခမဲ့မေ့နေတာလား
R: အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဟာ paid version တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။ သင်၏အသုံးပြုသူများသည်စာရေးသူမှအပြည့်အဝသဘောမတူသောစီမံကိန်းတစ်ခုသို့အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုထည့်ရန်တောင်းဆိုသောအခါနှစ်ခုမှတစ်ခုသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်သည် (သို့) တတိယပါတီသည်စီမံကိန်းကိုဖော်ထုတ်သည် (ဤသည်မှာစီမံကိန်းသည်အရင်းအမြစ်ဖွင့်လှစ်မှသာလျှင်ဖြစ်ပျက်နိုင်) ပြီး၊ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ (သို့) တူညီသောစာရေးသူသည်သီးခြားလျှောက်လွှာတစ်ခုအနေဖြင့်ချိတ်ဆတ်ကိုပြုလုပ်သည်။
ADW.Launcher forks တွေအများကြီးရှိတယ်။ အချို့ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ တချို့ကသိပ်မများပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူကမှသုံးစွဲသူတွေမေးတာကိုထပ်မထည့်လိုက်လို့ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဘယ်ကြောင့်ပေးရသနည်း။ ကောင်းပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အစမှာငါပြောခဲ့သလိုငါသင်ယူဖို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ငါကြိုက်လို့ပါ။ သုံးစွဲသူအခြေပြုတောင်းဆိုချက်သည်ထိုလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကသုံးစွဲရမည့်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
အခမဲ့တစ်ခုမေ့လျော့? ငါ့ကိစ္စမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်သည်အခြားသူများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာလခပေးသော version ကိုထုတ်ဝေပြီးမကြာမီ Iphonedroid SL တွင်ပရိုဂရမ်မာတစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်အလုပ်ရခဲ့သည်။iphonedroid.comငါ Android ကိုရည်စူးနိုင်သည်သောနေ့စဉ်နာရီ၏ခွဲတမ်းကိုဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ application များမကြာသေးမီကလက်ခံရရှိခဲ့သည့် update အသစ်များသိသိသာသာကျဆင်းသွားစေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်နှင့်တိုးတက်ရန်ကြိုးစားနေသည်မှာအခမဲ့နှင့် Opensource ဗားရှင်းအတွက်နှင့်ပေးဆောင်ထားသော version အတွက်ပါ။
> P: သင်၏ ADW Launcher Application သည်မရေမတွက်နိုင်သောချက်ပြုတ်ထားသော ROM များအတွက်ပုံမှန် desktop ဖြစ်သည်ကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကသင့်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါသလား။
R: ADW ၏အားနည်းချက်များရှိနေသော်လည်း၎င်းကိုလူများနှင့် developer များကအသုံးပြုခဲ့ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ဂုဏ်ယူသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထုတ်လုပ်သူများထံမှတောင်းဆိုမှုများနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုလက်ခံရရှိထားပါတယ်၊ များသောအားဖြင့်အာရှ (သို့) အရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများက ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ (သို့) စိတ်ကြိုက်ဘာသာပြန်ဆိုချက်များမှာပါ ၀ င်ချင်တယ်။ သို့သော်ဒုတိယအီးမေးလ်ပြီးနောက်သူတို့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုတော့ပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Mobile World Congress မှာ ၂၀၁၁ မှာ ViewSonic hybrid တက်ဘလက် (Windows / Android dual boot ပါတဲ့) ကိုပြုပြင်ခဲ့တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုပြင်ထားတဲ့ ADW ဗားရှင်း (ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်သူတို့ကရွေးစရာအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအခြေခံကျကျဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီ) ViewSonic ငါ့ကိုဆက်သွယ်ဘယ်တော့မှပေမယ့်,
> P: သင်၏လျှောက်လွှာများလိုက်လျှောက်သောလမ်းကြောင်းကိုသင်၏သုံးစွဲသူများ၏ပြောဆိုချက်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ သူတို့အမိန့်ပေးသလား၊
R: ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သုံးစွဲသူတွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်မပြည့်မချင်း (အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်စီအတွက်ကွဲပြားနိုင်တဲ့) အုပ်ချုပ်မှုကိုခံကြရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်အားပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းတွင်သာကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုမှုများရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်ဗဟုသုတမှမပေးသောကြောင့်သို့မဟုတ်ကျန်လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် Android နှင့်၎င်း၏ဂေဟစနစ်၏အတွေးအခေါ်နှင့်မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါအဟောင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် "ဂန္" အသုံးပြုသူများနှင့် "intrepid" အသုံးပြုသူများကိုနှစ်သက်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲ function ကိုအသစ်ထည့်သွင်းရန်ချိန်ခွင်လျှာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစား ...
> P: Android မှာပရိုဂရမ်ရေးတဲ့သူတွေကိုဘာပြောကြလဲ။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ? အကျိုးအမြတ်? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု?
သင်ဘာလုပ်သည်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါကများသောအားဖြင့်သေသွားနိုင်သည်။
> P: Android လောကထဲမှ Ander ဘယ်လိုနေလဲ။ သင်ဘာလုပ်သလဲဆိုတာသူတို့သိသလား။ သင်၏ပြပွဲများရှိလူများနှင့်တွေ့သောအခါမြေအောက်ရထားကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။
R: ငါကအရမ်းအစွန်းရောက်ပြီးထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ငွိမျးခမျြးသာသော၊
ငါ၏အသိအကျွမ်းများသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် "ထူးဆန်းသောရယ်စရာ" ဖြစ်သည်။ မည်သူဆိုလိုမည်ကိုမည်သူသိသနည်း
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တော့လမ်းပေါ်မှာ (ငါ့မသိသေးတဲ့ဘယ်သူ့ကို) ငါ့လျှောက်လွှာကိုသုံးတဲ့မြေအောက်ရထားနဲ့ဘယ်သူမှငါ့ကိုမတွေ့သေးဘူး ... အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ငါဘာမှပြောမရဆိုတာတော့မသိဘူး။ သူ့ကိုငါတော်တော်ရှက်တယ် am
> P: နောက်ဆုံးအနေနှင့်ဂူးဂဲလ်အမှုဆောင်အရာရှိများကကျွန်ုပ်တို့ကိုစာဖတ်မည်ဆိုပါက၎င်းတို့အတွက် Android အတွက်မည်သည့်အကြံဥာဏ်များပေးမည်နည်း။
R: Ufffff .... ငါအကြောင်းအပိုဒ်ရေးသားနိုင် ... ဒါပေမယ့်ငါဘူတာရုံသို့ရောက်တဲ့အခါအချို့သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအတွက် Android ကိုပြည့်တန်ဆာလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး၎င်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနည်းငယ်ပိုပြီးဖွင့်ဟလိုက်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Androidsis အင်တာဗျူးများ - @Anderwebs
ဒါကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ငါ ADW Launcher တီထွင်ခဲ့တဲ့သူဟာစပိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ဒါက Launcher Pro ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူပဲ။ ငါကစပိန်က Android ကိုကြိုက်တယ်၊ အရမ်းစားတယ် OS အနေနှင့်သူအဆုံးသတ်တွင်သူနှင့် ပတ်သက်၍ သူပြောခဲ့သည့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာထူးဆန်းသည့်အချက်မှာသူ၌သူ့တွင်မည်သည့်စီမံကိန်းမျှမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ADW Launcher2ကိုယခုတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရပြီး၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဂွာတီမာလာမှနှုတ်ဆက်သည်။
Google Docs, Android အတွက်ဇာတိအပလီကေးရှင်း